အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ၌ ပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွား လူ ၂၀ ဦး သေဆုံး ၊ ၆၀၀ ကျော်ဒဏ်ရာရ
အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံမြို့တော် ဘတ်တာမြို့(Bata)၌ ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားရာ အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၂၀ ဦး သေဆုံးပြီး အခြား ၆၀၀ ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
(၅)နှစ်ကြာ ကာလပြီးနောက် ဂီနီနိုင်ငံတွင် အီဘိုလာရောဂါတစ်ကျော့ပြန် ဖြစ်ပွား၊ အတည်ပြုလူနာ (၁၅)ဦးအထိ တိုးမြင့်လာ
ကာနေလ်ခရီလ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဂီနီနိုင်ငံ အီဘိုလာရောဂါ အတည်ပြုလူနာ (၁၅)ဦးအထိ တိုးမြင့်လာပြီး ၎င်းတို့အနက်(၅)ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း N'Zerekoreပြည်နယ် ဆေးရုံအကြီးအကဲAdama Kabaက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကဘူးလ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ဟီရတ်ပြည်နယ် အီရန်နှင့်ထိစပ်နေသည့် အစ္စလာမ်မာဗတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်က လောင်စာဆီတင်ကား ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း Tolo သတင်းရုပ်သံ၏ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် သတင်းများအရ သိရသည်။
အီရန်စစ်တပ်က ကီလိုမီတာ ၃၀၀ အထိ ပစ်ခတ်နိုင်သည့် စမတ်ဒုံးကျည် အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့
တီဟီရန်၊ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အီရန်နိုင်ငံ စစ်တပ်က အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ ၃၀၀ အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည့် စမတ်ဒုံးကျည်သစ် တစ်မျိုးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အီရန်စစ်တပ် မြေပြင်တပ်ဖွဲ့မှူးကြီး Kiomars Heidari က ဆိုသည်။
မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ ဒုံးကျည်ဌာနစိပ်များမှ အလွန်တိကျပြီး စွမ်းအားကြီးမားသော တာလတ်ပစ်ဒုံးကျည်သစ်ကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မှူးကြီး Heidari ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ Tasnim သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဒုံးကျည်သည် ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် အလိုအလျှောက်စနစ်ဖြင့် ပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်း နှင့် ယင်းသည် ပစ်မှတ်များအား တိကျသေချာစွာ ထိမှန်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ (Xinhua)
TEHRAN, Feb. 14 (Xinhua) -- Iran's army on Sunday testedanew smart missile witharange of 300 km, the Iranian Army Ground Force Commander Kiomars Heidari said.
The missile units of the ground force tested the new mid-range missile to evaluate its accuracy and power, Heidari was quoted as saying by Tasnim news agency.
The missile can be fired in various weather conditions by automated systems, and it can hit targets with pinpoint accuracy, he said.
Iranians ride pastamissile on display for the Defense Week in Tehran, Iran, on Sept. 27, 2020, to mark the 40th anniversary of the Iraq-Iran war (1980-1988). (Xinhua/Ahmad Halabisaz)
အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် တာလီဘန်တို့၏ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနေရာတစ်ခု၌ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား ၊ လူ ၃၀ သေဆုံး
ကဘူးလ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Balkhပြည်နယ် Dawlatabad ဒေသရှိ ဘာသာရေအဆောက်အဦတစ်ခု၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် တာလီဘန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ က ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နေစဉ် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင် (၃၀ဦး) သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ယင်းပြည်နယ်စစ်တပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Rezaiက အချင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မော်စကို ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/စိုးမိုး
အီရန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Zarif သည် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်က ရုရှားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ရုရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergey Lavrov နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရာတွင် အီရန်နျူကလီးယားအရေး ဘက်စုံသဘောတူညီမှုစာချုပ် စသော ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဂျီနီဗာ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ်ကော်မတီ (IOC) နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့က ယခုနှစ်တွင် တိုကျိုအိုလံပစ်ကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အိုလံပစ်ပွဲ ပယ်ဖျက်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းကို ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်က ငြင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘဂ္ဂဒက်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
အီရတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ဘဂ္ဂဒက်တွင် လများစွာ ငြိမ်သက်နေခဲ့ရာမှ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်း၌ အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲမှု နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၃၂ ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီး လူ ၁၁၀ ဦးလည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း လုံခြုံရေး သတင်းရင်းမြစ်များနှင့် အီရတ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။